ပင်မစာမျက်နှာမိမိစာမျက်နှာဓာတ်ပုံများဗီဒီယိုများခေတ်သစ်ဖိုရမ်ကဗျာတင်ရန်ဘလော့စ်များဘလော့ပို့စ်တင်ရန်မိုဘိုင်းဖုန်းနည်းပညာမျာနည်းပညာများထူးဆန်းထွေလာဝထ္ထုတိုဟာသများဗဟုသုတသုတများရသများဆောင်းပါးများသတင်းများပြည်တွင်းသတင်းပြင်ပသတင်းများဘာသာရေးများကျန်းမာရေးအသင်းအဖွဲ့များခေတ်သစ်သူလေးများ~ဂိမ်းကစားရန်~ခေတ်သစ်စကားဝိုင်းFull Chat Roomဆော့ဖ်ဝဲများနည်းပညာများအခမဲ့ ရောင်းဝယ်ကဏ္ဍCSS ကုတ်များယူရန်
ချစ်မိလို့များ Added by ❉❦☆ခလေး(ဂျူဂျူး)❉❦☆0Comments
ညီမင်းခိုင် - နွယ်နီ ( From new Album - လက်ခံမလား ) Added by နေနော်(အမုန်းမဲ့)0Comments
ကြိုနေစေချင်တယ် Added by ချစ်ဦးမောင်0Comments
ကဗျာအက်ဒ်မင်ဇလပ်နွယ် postedaphoto လှလားဒီဇင်ဘာ 12, 2013 0
ယခုအချိန်တွင်ရဲရဲဟာ ခေတ်သစ်မြို့တော်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပါပြီဒီဇင်ဘာ 12, 2013 Welcome Them! မင်းချစ် liked မင်းချစ်'s profileဒီဇင်ဘာ 11, 2013ကဗျာအက်ဒ်မင်ဇလပ်နွယ် leftacomment for မမ ကိုချစ်သော ဇွဲ"ဘဝင်ဆူစရာအလှထူးမရှီတဲ့ဘဝ
လည်းတန်ဖိုးမထား၊၊ အလှမတင့် ဘဝမမြင့်
ဘဝရှင်ရတာလည်းပန်းလှပါပြီး၊၊ နေ့ကာပင်ပန်း…"ဒီဇင်ဘာ 8, 2013ကဗျာအက်ဒ်မင်ဇလပ်နွယ် and မမ ကိုချစ်သော ဇွဲ are now friendsဒီဇင်ဘာ 8, 2013ကဗျာအက်ဒ်မင်ဇလပ်နွယ် leftacomment for မမ ကိုချစ်သော ဇွဲဒီဇင်ဘာ 8, 2013ကဗျာအက်ဒ်မင်ဇလပ်နွယ် leftacomment for မမ ကိုချစ်သော ဇွဲ"object width="446" height="290" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0">;
"ဒီဇင်ဘာ 8, 2013ယခုအချိန်တွင်မမ ကိုချစ်သော ဇွဲဟာ ခေတ်သစ်မြို့တော်ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်ပါပြီဒီဇင်ဘာ 8, 2013 Welcome Them! နောက်ထပ်... RSS
Started by Mr.S (HunteR) in ကဗျာ. Last reply by ဇလပ်နွယ် Jul 27, 2013. 15 Replies
Started by မိုးနှင်းဖြူ in ကဗျာ. Last reply by ဇလပ်နွယ် အောက်တိုဘာ 18, 2013. 14 Replies
Started by Mr.S (HunteR) in ကဗျာ. Last reply by ko ko aye Apr 25, 2013. 11 Replies
Started by Mr.S (HunteR) in ကဗျာ. Last reply by Game Apr 3, 2013.9Replies
Started by ♥♥အရိပ်ကလေး♥♥ in ကဗျာ. Last reply by ♥♥ဧကရီ♥♥ Sep 5, 2013. 8 Replies
ကားထဲမှာ အားသွင်းတာတွေ အဆင်ပိုပြေစေဖို့ 
Posted by သီဟ on May 16, 2013 at 11:53pm 1 Comment
Media နဲ့ ပက်သတ်သမျှ အကုန်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ Free Studio 6.1.13 you tube လည်းရဒယ် နော်
Posted by နေသာ on October 26, 2013 at 10:55am 1 Comment
Posted by popo on April 6, 2013 at 10:38pm0Comments
GO there Myanmar 2014 beta 3.8.3 for android
Posted by နေသာ on November 3, 2013 at 1:06pm 1 Comment
Posted by တေးအင်္လကာ on September 9, 2013 at 12:16pm0Comments
Posted by သီဟ on April 30, 2013 at 12:00am2Comments
စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ Widget Gallery လေးတွေနဲ့အလှဆင်ရအောင်
Posted by ထက်ထက် on August 3, 2013 at 11:34am2Comments
ကိုယ့်ချစ်သူက သင့်ရဲ့ဖူးစာရှင် ဟုတ်မဟုတ် သိချင်ကြဘူးလား(ဗေဒင်)
Posted by ကာရံငယ်1 on April 30, 2013 at 7:27pm2Comments
Posted by သီဟ on April 20, 2013 at 10:45am2Comments
တာဝန်ခံအက်မင် ကွန်ပြုတာအတွက် ANDROID ဆော့ဝဲ မလိုသော VIBER
Posted by ရှင်းသန့် on May 7, 2013 at 10:17pm 1 Comment
Admin များနှင့် ဆိုဒ်၏လိ…
ခေတ်သစ်မြို့တော်တွင်မှတ်ပုံတင်ရန်or Sign In
2013-March-13. မြန်မာ သက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ ခု၊ တပေါင်း လဆန်း ၂ ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူး နေ့၊ ရက်ရာဇာ၊ မွန်းလွဲ ပြဿဒါး။ (မြန်မာ စံတော်ချိန်) ဖလက်သီချင်းနားဆင်ရန်
လက်ဆောင်ပေးရန် © 2014 Created by လမင်းသား. Powered by